Ny fifehezan'olombelona dia tsiambaratelon'ny kalitaon'ny Apple News | Vaovao IPhone
Apple News Nanjary mpamatsy mahaliana ankehitriny ny atiny any amin'ireo firenena misy azy io. Efa an-taonany maro taorian'ny nanombohany, na izany aza, ny fanitarana azy dia somary miadana sy maharary, indrindra ho antsika izay tsy afaka mamoaka na mamaky amin'ny alàlan'ny lampihazo izay toa voadinika tokoa.
Mandritra izany fotoana izany, mahazo antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny Apple News sy ny antony ahazoana tehaka avy amin'ny mpanonta izahay. Ny tsiambaratelo hitazonana ny kalitaon'ny Apple News sy ny fahadiovan'ny atiny dia ny fampiasana ny fifehezan'olombelona amin'ny famoahana.
Izay no fomba The New York Times Magazine Nanazava ny fomba fiasan'ny Apple News, manambara an'ity tsiambaratelo misokatra ity momba ny kalitaon'ny famoahana amin'ny sehatra:
Mampidi-doza ny paikadin'i Apple. Ianao mampihatra ilay maoderina nampiasanao ny taona lasa izay ho an'ny App Store sy ny sivana atiny. Fantatsika izao kely kokoa ny amin'ny fisafidianan'ny Apple izay tantara navoaka tao amin'ny Apple News.
Ny zavatra marani-tsaina, raha jerena ny fomba fihetsiky ny orinasa toa ny Facebook, dia ny fieritreretana fa ny sivana ataon'olombelona dia tsy mandaitra tanteraka amin'ireo zavatra ireo, ary ambonin'izany rehetra izany dia afaka mamantatra ny fandanjana izy ireo amin'ny fomba fampahalalana iray izay izany dia. Na izany aza, ny fahombiazan'ny fahitan'ny Apple matetika ireo raharaha ireo dia midika fa afaka mametraka latsa-bato kely fitokisana amin'ny latsa-bato ataon'ny orinasa Cupertino isika. Na izany aza, sarotra amintsika ny mino fa mahavita mitantana atiny be dia be toy izao i Apple, na ireo asa ireo dia tsy hosoloin'ny algorithma mandritra ny fotoana maharitra. Mandritra izany fotoana izany, fantatrao ny antony itenenan'izy ireo fatratra amin'ny Apple News any amin'ireo firenena misy ny fampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny fifehezan'olombelona no tsiambaratelo kalitaon'ny Apple News
Apple Maps dia manampy ny làlan'ny fitateram-bahoaka mankany Soisa